स्वोस्थ रहन ई चिज खान जरुरि छ ,, – Ranga Darpan
स्वोस्थ रहन ई चिज खान जरुरि छ ,,
रंग दर्पण १७ माघ – मान्छेको जिबनमा स्वोस्थ रहन धेरै भिटामिन ए खाने कुरा आबसेक पर्छ । तेसैमा निम्न खाने कुरामा ध्यान दिन यक्धम जरुरि छ, तर ई खाने कुरालाई ब्यालेन्स मिलायर प्रोग गर्न जरुरि छ, स्वस्थ्यप्रति सचेत व्यक्तिहरुले संभव भएसम्म त्यही खानेकुरा खान्छन्, जसले शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वको आपूर्ति गरिदिन्छ ।
हामी चाहि अघाउनका लागि खान्छौं । तर, खानेकुराको खास महत्व भनेको त्यसबाट पोषण तत्व प्राप्त गर्नु नै हो । हामीलाई थाहा नै छ, शरीरलाई विभिन्न किसिमको पोषक तत्व आवश्यक हुन्छ । अतः त्यस्ता पोषक तत्व खानेकुराको माध्यामबाट हाम्रो शरीरमा आपूर्ति हुन्छ ।
कतिले त त्यती नै खानेकुरा खान्छन्, जति शरीरलाई आवश्यक छ । अर्थात शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वको सन्तुलन मिलाएर त्यती नै मात्रामा खानेकुरा खान्छन् । अब हामीले पनि यस्तो कुरामा सचेत हुन जरुरी छ । किनभने अहिले प्रशोधित खानेकुरा बढी हुने भएकाले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वको अभाव हुँदै गएको छ । त्यसैले खानेकुरा सेवन गर्दा जिब्रोको स्वाद मेट्न र पेट भर्न मात्र होइन, शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्व आपूर्ति गर्नका लागि खानुपर्छ ।
शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वमध्ये भिटामिन ई पनि एक हो । भनिरहनु पर्दैन, शरीरलाई भिटामिनको जरुरत पर्छ ।
यो बोसोमा घुलनशील भिटामिन हो । यसले एक एन्टिअक्सिडेन्टका रुपमा पनि काम गर्छ । यसका आठ अलग-अलग रुप हुन्छन् । कोशिकाहरुले एक-अर्कासँग प्रतिक्रिया जनाउनका लागि भिटामिन ईको उपयोग गर्छन् र कैयन् महत्वपूर्ण काम गर्छन् । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बलियो बनाएर राख्छ । साथै, शरीरलाई एलर्जीबाट बचाइराख्न पनि मद्दत गर्छ ।
यसलेउ कोलस्ट्रोल नियन्त्रणमा राख्न प्रमुख भूमिका खेल्छ । त्यसैले यो भिटामिन अत्यन्त आवश्यक छ शरीरमा । सही खानपानका माध्यमबाट सजिलै भिटामिन ई प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
भिटामिन ई कुन खानेकुराबाट पाइन्छ ?
भिटामिन ई हामीलाई अन्डा, ड्राई फ्रट्स, बदाम, ओखर, सुर्यमुखीको बीउ, हरियो पत्तेदार तरकारी, सकरखण्ड, तोरी सलगम, एवोकेडो, ब्रोकाउली, आँप, मकै आदिबाट प्राप्त हून्छ ।
कति चाहिन्छ शरीरलाई ?
भिटामिन ई शरीरलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा उमेर तथा लिंगमा निर्भर गर्छ । गर्भावस्था, स्तनपान तथा बिमारीहरुमा यसको मात्रालाई बढाउन र कम गर्न सकिन्छ । विशेषज्ञका अनुसार विभिनन उमेरमा भिटामिन ई दैनिक सेवन गर्नुपर्ने मात्रा यस प्रकार छः
नवजात शिशुः ४ मिलिग्राम
६ महिना देखि १ वर्षः ५ मिलिग्राम
१ देखि ३ वर्षः ६ मिलिग्राम
४ देखि ७ वर्षः ७ मिलिग्राम
८ देखि १३ वर्षः ११ मिलिग्राम
१४ वर्षभन्दा माथिः १५ मिलिग्राम
स्तनपान गराउने महिलाः १७ मिलिग्राम
भिटामिन ई अभाव भएमा के हुन्छ ?
– दृष्टि कमजोर हुनु । हेर्दा आँखा तिर्मिराउनु ।
-हिँड्दा लड्खडाउनु । कमजोरी महसुस हुनु ।
-शरीरका अंगहरुले सुचारुरुपमा काम नगर्नु ।
-मांसपेशीहरुमा अचानक कमजोरी आउनु
-आँखाको चालमा असामान्य स्थिति पैदा हुनु ।
-प्रजनन क्षमता कमजोर हुनु ।
भिटामिन ई का साइड इफेक्ट्स
भिटामिन ईयुक्त भोजन खानु शरीरका लागि फाइदाजनक छ । तर, सप्लिमेन्टका रुपमा भिटामिन ईको अत्यधिक सेवनले हानी पनि गर्न सक्छ । यसको अधिकताले रक्तस्रावको खतरा बढ्छ र मस्तिष्कमा गम्भीर रक्तस्राव हुन सक्छ ।
गर्भवती महिलाको शरीरमा भिटामिन ईको अधिक मात्रा हुँदा बच्चामा खोट पनि उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले डाक्टरको सल्लाहबिना भिटामिन ई लिनु हुँदैन, खासगरी त्यतिबेला जब रगतलाई पातलो गर्ने औषधि, जस्तै एस्पि्रन, लिइरहनुभएको छ । भिटामिन ईको कमि भएका व्यक्तिहरुले पनि यसको अधिक मात्रामा सेवन गर्नु हुँदैन ।
भिटामिन ईका फाइदा
– हाम्रो शरीरले भिटामिन ईको निर्माण गर्न सक्दैन । यसलाई पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न भिटामिन ईबाट भरपुर खानेकुराहरु खानुपर्छ । यो हामीलाई तोरीको तेल, बदाम, तिल, जैतुन आदिबाट प्राप्त हुन सक्छ । त्यसैले नियमितरुपमा खानामा तेलको सेवन गर्नुपर्छ ।
– भिटामिन ईले हाम्रो त्वचाको हेरविचार गर्छ र यसलाई स्वस्थ राख्छ । यसले त्वचाको रुखोपन, चाउरी, समयभन्दा अगावै बुढो हुने तथा सुर्यको हानिकारक अल्ट्रा भोइलेट किरणहरुबाट बचाउँछ ।
-यसले लाल रक्त कणिकाहरुको निर्माणमा पनि सहयोग गर्छ । शरीरमा भिटामिन ईको मात्रा अधिक हुने व्यक्तिहरुमा मुटु रोगका खतरा कम हुन्छ ।
– यसले महिलारुलाई मासिक धर्मका दौरान हुने दुखाईबाट बचाउँछ । साथै महिलाहरुमा स्ट्रोकको सम्भावना पनि कम गर्छ ।
– भिटामिन ईले क्यान्सरबाट पनि बचाउँछ । क्यान्सर लागेका व्यक्तिहरुको शरीरमा भिटामिन ईको मात्रा कम हुन्छ । यो ब्रेस्ट क्यान्सरको रोकथाममा पनि उपयोगी हून्छ ।
-भिटामिन ईको सप्लिमेन्ट लिने व्यक्तिहरुमा अल्जाइमर्स हुने खतरा कम हुन्छ ।
– भिटामिन ईको कमि हुँदा डाइबिटिजको खतरा बढ्छ । यसले इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाउँछ ।
-कपाल नझर्ने औषधिबाट हुने साइड इफेक्टलाई पनि यसले कम गर्छ ।
आज चन्द्र ग्रहणलाग्दै हेर्नुहोस के गर्ने के नगर्न हुने ,,